Radovan Karadzic oo racfaan ka qaadanaya xukunkii lagu riday – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaRadovan Karadzic oo racfaan ka qaadanaya xukunkii lagu riday
Radovan Karadzic oo racfaan ka qaadanaya xukunkii lagu riday
Hiiraan Xog, Apr 23, 2018:- Hogaamiyihii Serbiyiiinta Boosniya ee mar laga cabsan jiray, haatanna loo xukumay dambi dagaal, Radovan Karadzic, ayaa maanta oo Isniin ah waxa uu bilaabayaa racfaanka uu ka qaatay xukunka ay ku rideen xaakimiinta Qaramada Midoobay.
2016-kii, ayey aheyd markii hogaamiyihii hore ee dhinaca siyaasadda ee Seerbiyiinta Boosniya lagu helay 10 dambi oo kala duwan, oo waxaa ka mid ah dambiga ah inuu soo maleegay xasuuqii 1995-kii ka dhacay magaalada Srebrenica, kaas oo lagu tirinayo inuu ahaa midkii ugu xumaa ee uu dhiig ku daato ee Yurub ka dhaca tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana ninkaasi lagu xukumay 40 sano oo jeel ah.
Waa fursaddii ugu dambaysay ee Radovan Karadzic ee isugu dayayo inuu ku qanciyo xaakimiinta inuusan wax dambi ah gelin, ama ugu yaraan uu u qalmo in kiiskiisa dib loo dhageysto.
Waxaa lagu xukumay inuu ka dambeeyay dilkii ku dhawaad 8,000 oo ah rag iyo wiilal Muslimiin ah oo lagu dilay magaalada Srebrenica, kuwaas oo maydadkooda lagu daadiyay xabaalo wadareedyo, iyo weliba go’doomintii 44 bilood lagu hayay caasimadda Boosniya ee Sarajevo, halkaas oo 10,000 oo qof oo rayid ah ay ku dhinteen toogasho toos ah iyo duqeymo aan kala joogsi laheyn.
Radovan Karadzic ayaa waxa isku soo duwday 50 qodob oo uu sal uga dhigay racfaankiisa.
Kooxda oogaysay dacwadda ninkaas loo haysta ayaa ku doodaysa inuu si fudud ku baxsaday, oo waxa ay leeyihiin waxa ay aheyd in xaakimiintu ay ninkaasi ku heli lahaayeen dambi ah inuu xasuuq ka gaystay todoba magaalo iyo tuulooyin kale.
Waxa ay sheegayaan inuu qeyb ka ahaa burcad si wadajir ah u doonayay in gebi ahaanba bulshada Muslimiinta ah looga saaro dhul ay sheegtaan Seerbiyiinta Boosniya, uuna mas’uul ka ahaa xaaladdii ka taagneyd xeryo loo farsameeyay in dadka lagu laayo.
Waxa ay ku doodayaan in xukunkiisa la gaarsiiyo mid cimrigaa haku furta ah.
Liverpool star Mohamed Salah beats Manchester City’s Kevin De Bruyne to PFA Player of the Year award after stunning debut season at Anfield.
Dad u dhashay dalka Britain oo shil ku dhintay iyaga oo cumraysanaya